61 taona nanaovana hosodoko: nodimandry, omaly, Raparivo RR | NewsMada
61 taona nanaovana hosodoko: nodimandry, omaly, Raparivo RR
Par Taratra sur 08/11/2018
Nanamaloka ny lanitr’i Gasikara, hatramin’ny omaly maraina, ny fahafantarana fa nindaosin’ny fahafatesana, teo amin’ny faha-84 taony, Raparivo Ramaheninarivo Roland, mpanao hosodoko fanta-daza, rehefa tsy salama nandritra ny fotoana maromaro.
“Raparivo RR”, io ny soniany amin’ny maha mpanao hosodoko azy, saingy Raparivo Ramaheninarivo Roland ny teny anarany. Teraka ny 22 febroary 1934, tao Isoraka Ampantsakana Antananarivo, izy. Zana-dRaparivo Gaston sy Rasoanjanahary. Izy no nandray ny toeran’ny lahimatoa, rehefa tsy azo ny zokiny ka efatra mianadahy ny zandriny, vavitokana ny iray.
Tsy niaina firy teto Antananarivo ry zareo. Voaray niasa tany Moramanga mantsy ny rainy, izay “comptable” sady nanao asa antselika amin’ny fakana sary. Ny reniny kosa, nanokatra “épicerie”. Rehefa nitsangana ny MDRM Moramanga, Razafindrabe Victorien ny filohany ary anisan’ny mpikambana tao Raparivo Gaston, saingy tsy nisehoseho loatra, noho ny asany.
Raparivo RR, andrarezin’ny zavakanto malagasy izany lehilahy izany. Iray amin’ireo vitsivitsy namirapiratra eran’izao tontolo izao izy. Nampiaiky ny matihanina ary vidina lafo ny sanganasany. Ny taona 1957 no nanombohany ny hosodoko. Tsy nisy nampianatra izy fa efa tao aminy ny talentany, izay nohateveniny samirery tamin’ny fikirizana sy ny fikarohana.
Amin’ny sokajy “impressionniste” ny hosodokon-dRaparivo RR. Mampiavaka ny sanganasany ny fitiavany maneho ny zavaboahary: ny ala sy ny zavamananaina ao aminy, ny rano ary ny tanindrazany. Ny antony, nanamarika ny fahazazany ny niainany ny “Raharaha 1947”, tena nanamafy ny fitiavany ity tanindrazana ity.
Haingana ny fisongadinana sy ny fahombiazany teo amin’ny tontolon’ny hosodoko. Ny taona 1960, efa nanomboka nampiranty ny sanganasany, teto Madagasikara sy tany ivelany, izy. Marobe ireo hetsika goavana efa nandraisany anjara, toy ny tany amin’ny “Musée international des arts du 20ème siècle”.
Nifanome tanana tamin’ireo mpanakanto toa azy Raparivo RR ho fampiroboroboana ny hosodoko. Nanaporofo izany ny nitondrany ny komitim-pirenena miahy ny kanto araka endrika amam-bika sy ny nananganany ny vondron’ny mpanakanto araka endrika amam-bika na ny Unapm.
Ankoatra ny maha mpanao hosodoko azy, mpanao gazety mpakasary, tao amin’ny Courrier de Madagascar sy Madagascar Matin, ihany koa Raparivo RR, tamin’ny taona 1970-1980. Araka ny fantatra, hotanterahina ny asabotsy 10 novambra izao ny fandevenana ny nofomangatsiakan-dRaparivo Ramaheninarivo Roland.